Faka i-Android kwi-Htc Kaiser | I-Androidsis
KUSENOKWENZEKA UKUFAKA I-ANDROID KWEZINYE IIModeli ZE-HTC
antocara | | nokuVavanyelwa, Tutorials
Unyanisile. Njengoko sifunda kumaphepha aliqela ecandelo, abafana abavela kwi-XDA-Abaphuhlisi, bayaphuma.
Ngoku ungafaka ifayile ye Inkqubo ye-Android kwiimodeli ezahlukeneyo zakudala ze nokuVavanyelwa njengakwiKaiser, iTouch kunye neTouch Cruise. Ngoku basebenzela iimodeli IHTC yeTouchd HD nakwisony Xperia X1.
Ayithethi malunga ne-rom ephekiweyo, nangokufaka inkqubo kwi-boot. Ngcono okwangoku, faka iifayile kwimemori khadi kwaye ukuqala kwakhona okulula kwifowuni ukhethe ukuba yeyiphi inkqubo esifuna ukuqala ngayo. Ummangaliso yinkqubo yeLinux eqala ekuqaleni kwaye ikubuze ukuba ukhethe ntoni. Le nkqubo ibizwa ngokuba HARET.
Kwinguqulelo ye Android iyafumaneka ukulungiselela le njongo, ikhekhe. Ayisebenzi nge-100% kodwa iya kugqitywa ngexesha elifutshane.
Ndiyathemba ukuba inani leetheminali kunye neempawu ezikhoyo zokuqhuba ziya kunyuka.
Ukuba ufuna ulwazi ngakumbi apha.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » nokuVavanyelwa » KUSENOKWENZEKA UKUFAKA I-ANDROID KWEZINYE IIModeli ZE-HTC
I-claudio fariña sitsho
Ndifuna ukuvavanya i-Android.
Phendula u-claudio fariña
UDaniel Garcia sitsho
Molweni nonke, ndifuna ukuvavanya i-Android kwi-HTC 8925 kwaye sele ndinayo ifolda yokuqalisa kunye neHARET ngaphakathi kuyo, kodwa ndingathanda ukwazi ukuba loluphi ukhetho olungcono: Gcina iHaret kwikhadi le-SD okanye kwimemori yangaphakathi ifowuni, kutheni ndingazi ukuba, umzekelo, ikhadi le-SD lisuswe kwifowuni kwaye iHaret yayigcinwe ngaphambili ngaphambili, ngaba ndiza kuba neengxaki nge-Android? okanye izakusebenza ngokufanelekileyo? Kukho ukhetho lokufaka i-Android kodwa ngaphandle kokususa iWindows Mobile ... Ngaba kungcono ukususa i-WM ngokupheleleyo okanye ube nazo zombini iinkqubo ngaxeshanye? .. Kananjalo ukuba ushiya zombini ezi nkqubo, kubonakala ngathi ungakhetha inkqubo Windows Mobile okanye i-Android) esifuna ukuqala ngayo xa sicima kwaye siphinda sivule iselfowuni kwakhona? ... ndingavuya kakhulu xa undiqinisekisa ngokukhawuleza nceda ... Enkosi
Phendula kuDaniel Garcia
uariel morales sitsho
Uyifumana njani i harent kwaye phi
Phendula u-ariel morales